Moyo wandinogara nawo, Chitubu Novel Prize 2020 | Zvazvino Zvinyorwa
Moyo wandinogara nawo inyaya yenhoroondo yakanyorwa neSpanish José María Pérez, anonyanyo kuzivikanwa saPeridis. Yakabudiswa muna 2020 uye yakaiswa muSpain yainetsekana muna 1936. Kubva pakutanga, bhuku rakanakidzwa nekugamuchirwa kwakanaka nevaverengi nevatsoropodzi vezvinyorwa. Mugore rimwe chete rekuburitswa, rakapihwa mubairo wePrimavera de Novela.
Munyori anoratidzira musumo yebhuku kuti yakafemerwa nehurukuro yaakange ave nayo muchitima nemunhu waasingazive, uyo aive wedzinza rekare chiremba kubva kuvanhu veParedes Rubias. Akamuudza anecdotes akati wandei kubva kuhama dzake, pamwe nevamwe vavakidzani. Mutsara wega wega wenyaya iyi unotsigirwa nehurukuro yakataurwa, ine nyaya uye vatambi chaivo vanowedzeredzwa neimwe fungidziro.
1 Mwoyo Wandinorarama Na (2020)
1.1 Beato Mhuri
1.2 Miranda mhuri
2.1 Kuita sekugadzira
2.2 Mamwe mabasa ehunyanzvi
Moyo wandinogara nawo (2020)
Iyo inhoroondo yenhoroondo yakaiswa munharaunda yeParedes Rubias, pakutanga kweSpanish Civil War. Bhuku iri zvakarongeka en zvitsauko zvipfupi makumi mashanu, izvo vanotanga en Chikumi cha 1936 y kuguma Gumiguru 1941. Iyo rangano inosanganisira vatambi vakasiyana, vanopfuura nemumatambudziko akasiyana, kupfuura mhirizhonga.
Bhuku inoratidza mararamiro avanoita makore akaoma hondo ichienderera mberi uye mushure meizvi zvinoguma, asi pasina kurasikirwa netariro kuti zvese zvichavandudza. Zvese zvinoitika muSpain inorwadza chaizvo, asi nevanhu vakasimba, vanozorwa kuti vamununure, zvichibva parudo, mhuri uye chishuwo cheramangwana rakanaka
Moyo wandinogara nawo: ...
Honorio Beato akafirwa uye anogara nevanasikana vake vatatu: Caridad, Esperanza naFelicidad. Iye chiremba anozivikanwa anomhanya kiriniki muCubillas del Monte uye pamberi pehondo akashanda semusoro weSpanish Falange. Nguva imwe kukakavara kwakatanga, ivo vanosarudza kutiza mutaundi kuitira kuti pasave nekutsiva.
Esperanza ndomumwe wevatambi vakuru vari munyaya. Iye muratidziri wezvematongerwo enyika ari weChikadzi Chikamu cheFalange uye mukadzi ane hanya. Pamusoro pekudzivirira pfungwa dzake, anobatsira shamwari dzake dzerepublican, vazhinji vacho vakatongerwa rufu. Kunyangwe shanduko yakapihwa nehupenyu hwake, anofarira kuisa kugara zvakanaka kwevamwe asati afunga nezve ake.
Arcadio Miranda chiremba uye republican, murume akafirwa nemurume aine vanakomana vaviri, Gabriel naLucas, nemwanasikana anonzi Jovita - uyo anoshanda semudzidzisi mutaundi-. Mhuri yako inozobatwa zvakanyanya nekukonana kwevarwi, kutyisidzirwa kunyangwe nevarwere vavo nevanozivana navo. Vese vanozobviswa pamabasa avo kuti vawane mhedzisiro yemhirizhonga iyoyo.
Gabriel iye chiremba wechidiki ane basa rakanaka uye zvakare Kanzura weKanzuru yeGuta. Iye achafanirwa kuvanda nekuti ndewevane divi rinopikisa, kunyangwe achizopedzisira avharirwa. Kune chikamu chayo, Lucas, uyo ari pakati peicho chaicho chinotyisa chehama yake, inodaidzwa kumusoro, mamiriro ezvinhu aanoona seimwe nzira yekuponesa hupenyu hwake, sezvo aine rombo rakanaka pabasa rake.
Iyo nyaya inosanganisira mhuri mbiri, iya yaDr. Honorio Beato —Christian uye Falangist— uye iyo yeRepublican Dr. Arcadio Miranda. Vaviri ava vaizivana kubva kuzvidzidzo zvavo kuchikoro chekurapa, kunyangwe vaigara vaine zvimiro zvakasiyana zvematongerwo enyika Ivo nemhuri dzavo vakararama mazuva anofadza pamanheru erwendo rwekushanya, inoitwa gore rega rega pazuva reiyo Virgen del Carmen.
Pakati pechirariro ichi, vanhu vese vakagovana kudya nekutamba, vasingasarure divi rezvematongerwo enyika. Iko iriko uko -Mushure memakore mazhinji- Esperanza Beato naLucas Miranda vanosangana, Ini ndinoona kuti ichaunza nayo zvinopfuura hushamwari chete. Izvi ndisingafungidzire kuti mumazuva mashoma hondo inotyisa ingamuka, iyo yaizochinja zvese.
Vapikisi vehurumende vakabva pakuva vapanduki kusvika pakuva pamberi uye pakuva nezwi. Pakutora masimba, vakatanga kutambudza nhengo dzehurumende iri kubuda. La nyowani nyowani yakaunzwa semhedzisiro nyonganiso yezvematongerwo enyika neyemauto, iyo yakatsvaira zvese zviri munzira yayo.
Yese iyi mamiriro akaomarara akakonzera hunhu kubuda muvanhu; ushingi, kuzvininipisa, kubatana uye hunhu dzakakura kwazvo; kudarika kupesana kwezvematongerwo enyika.
José María Pérez - dhizaini uye munyori anozivikanwa saPeridis- akauya pasi rose neSvondo Gunyana 28, 1941 mu Cabezón de Liébana Municipality (Cantabria). Pandaive nemakore matatu, mhuri yake yakatamira kuPalencia, kunyanya kuguta reAguilar de Campoo, nzvimbo yaakagara kusvika apedza chikoro chesekondari.
Makore gare gare, akatamira kuMadrid kunoita zvidzidzo zvake zveyunivhesiti uye muna 1969 akapedza kudzidza segadziri. Akasarudza iro basa rinokurudzirwa nekufarira kwake kuchengetedza, kuchengetedza uye kununura kweSpanish hunyanzvi hwenhaka.
Kubva paakapedza kudzidza, akashanda mukuvakazve mamwe matembere, dzimba dzemitambo, zvivakwa, dzimbahwe, maraibhurari nedzimba dzetsika. Kwemakore makumi mana 1977 - 2017 Akananga muPalencia iyo Santa María la Real Foundation yeNhoroondo Nhoroondo, izvo zvakamubvumira kuti avepo mune dzinoverengeka dzakakosha kugadzirisa, senge:
Francisco de los Cobos Palace muEbeda
Monastery yeSanta María la Chaiyo muAguilar de Campoo
"Vasco de Quiroga" Residence Hall paComplutense University yeMadrid
Mamwe mabasa ehunyanzvi
peridis inozivikanwa zvakanyanya nekuda kwebasa rake seanoseka wekatuni, basa rakatanga mumakumi manomwe. Akagadzira makatuni ake ekutanga zvichibva kune vezvematongerwo enyika panguva iyoyo, izvo zvaakaburitsa mumagazini Syrian SP.
Kubva 1976 kusvika nhasi, Perez inoburitsa mitsara inosetsa mupepanhau Nyika. Nezve basa iri rine zvibereko, munyori yagadzira kuwanda kwakati wandei, uye semhedzisiro, mabhuku matanhatu ane mifananidzo yake yakanaka kwazvo aburitswa, zvichiratidza Peridis 1.2.3. Makore matanhatu kusvika shanduko (1977) uye Kuvimba uye hapana chisungo (1996). Akagadzira zvakare maviri cartoons katuni ye TVE.
Kubva 2002 kusvika ku2007 akapa tv series Makiyi eiyo Romanesque en TVE. Ichi chinyorwa chakave nemwaka mitatu apo kwehafu-awa kushanya kwezvakasiyana nhoroondo mamaki zvakapihwa. Mushure meiri basa, Peridis Akafambisawo mamwe mapurogiramu maviri pane imwecheteyo terevhizheni chiteshi, senge: Fambisa Makomo y Chiedza uye chakavanzika chemhedhedral.
Akatanga zvinyorwa zvake mundima yekunyora muna 1977, kunyangwe yaive muna 2014 paakapa bhuku rake rekutanga: Kumirira mambo. Makore maviri gare gare, akadzoka na: Kutukwa kwaMambokadzi Eleanor, rondedzero inoenderera nenyaya yapfuura. Kubva ipapo akanyora mamwe mabhuku matatu: Kunyangwe kuparara kunogona kuva tariro (2017), Mambokadzi asina humambo (2018) uye Moyo wandinogara nawo (2020).
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Novela » Moyo wandinogara nawo